Amanani Webhizinisi Wewebhusayithi ngeMboni Nezeluleko
Izimboni Nezeluleko Zewebhusayithi Yezimboni
NgoLwesine, Septhemba 1, 2011 NgoLwesithathu, Okthoba 26, 2011 Douglas Karr
Angikaze ngibe ngumlandeli omkhulu wokusetshenziswa izinga lokunciphisa njengenkomba yokusebenza eyisihluthulelo yokusebenza jikelele kwesayithi lakho. Izinga le-bounce lingahluka ngokuphawulekayo kusuka ebhizinisini elilodwa kuya kwelilodwa ngokususelwa ekusebenzeni kwenjini yosesho nasezingeni labo. Uma uklelisa imigomo efanele, ungahle ube nesilinganiso sokuncipha okuphansi. Uma ulinganisela ezinye ezingasebenzi, isilinganiso sakho sokuncipha singakhuphuka.
Our agency wake wasebenza nomshicileli oku-inthanethi owenza yonke imali yakhe ngezikhangiso futhi wayekhathazekile ngezinga lakhe lokushaya. Kodwa-ke, ama-bounces ayevame ukusho ukuthi abantu babechofoza izikhangiso! Ukuba namanani aphakeme kakhulu kwakuyinzuzo yakhe… yindlela ayenza ngayo imali. Ngakho-ke sisebenzise i-logic ukukala ukuchofoza kwakhe kwezixhumanisi zangaphandle futhi sakuqinisekisa!
Uma wenza ibhizinisi kuwebhu futhi unokusethwa kweGoogle Analytics kuwebhusayithi yakho, kungenzeka kakhulu ukuthi uyazi izinga lokuncipha lewebhusayithi yakho. Kepha, ngabe wazi noma yini ukuthi ibalwa kanjani, ukuthi isilinganiso esilinganiselwe se-bounce somkhakha wakho siyini noma nokuthi yiziphi izinto ezithinta izinga lakho lokuncipha? Ikhuthazwe yimibuzo ejwayelekile esiyizwile, le infographic ihloselwe ukukunikeza izimpendulo namathiphu wokukusiza uthuthukise isilinganiso sakho sokuncipha. Kusuka ku- I-kissmetrics.
Ungayithuthukisa Kanjani i-EdgeRank ku-Facebook
Hlanganisa Ingxoxo neSayithi lakho ngemizuzu emi-5